AirMail yakagadziridzwa uye ikozvino inoenderana neiyo iPad | IPhone nhau
Pave nemwedzi inodarika miviri kubva vanogadzira iyo AirMail kunyorera OS X yakaburitsa vhezheni yeIOS, asi inowirirana chete neiyo iPhone. Mukuzivisa kuvhurwa kweiyi nyowani email mutengi yeIOS, mushambadzi akataura kuti iyo iPad vhezheni yaive mubeta, iyo yaizowanikwa mune imwe nguva uye kuti zvingave zvakafanira kuibhadhara.
Mwedzi miviri gare gare, ivo vanogadzira AirMail vakagadzirisa iyo iPhone application ichiita kuti ive yepasirese, saka yatove inowirirana neiyo iPad uye hazvidiwe kuti ubhadhare iyi tsamba yekushandisa zvakare, iyo mumwe wangu Luis Padilla akanyatsoongorora.
Asi iyi nyowani nyowani kwete chete inounza isu kuenderana neiyo iPad, asi zvakare yakatiunzira nhamba yakakura yemabasa ayo vashandisi vazhinji vaida kubvira payakatangwa. Pakati pemabasa akakosha isu tinowana iyo Split View inoshanda inongowanikwa chete paIdad, rutsigiro kuchengetedza yedu application kuburikidza neTouch ID yeminwe yekunzwa kuwedzera kune yekuverenga ziviso yeemail atinotumira.
Chii chitsva muAirMail yekuvandudza yeIOS
Inoenderana neIpad uye Split View mabasa.
Chivimbiso chekuverenga maemail atinotumira.
Bata ID rutsigiro.
Kugadzirwa kwemapfupi ekhibhodi nekuda kwekutsigirwa kweyechitatu-bato kiyi.
Nyowani yakajairwa dhairekitori iyo inoronga ese maemail zvinoenderana nekukosha kwavo
Chiito chitsva nezvigunwe zviviri zvinotibvumidza kuenda kune inotevera meseji.
Mikana yekugadzira vanodhirowa sezvakangoita muManyorerwo ekushandisa.
Kubvira kwekuzvinyoresa zvakananga kubva kune zvakaipa zvatinogamuchira.
Kubatanidzwa ne Makarenda 5 uye PDF Nyanzvi 5 kubva Readdle.
Kubatanidzwa pamwe Nekuda, Kudada, Byword, Parcel, Instapaper uye Pocket.
Uye zvakare, zviziviso zvePOP3 maemail, Evernote zvakabatanidzwa, rutsigiro rweAOL maemail, kuwiriranisa neApple Watch… zvakagadziridzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » AirMail yakagadziridzwa uye ikozvino inoenderana neiyo iPad
Alejandro Fogera akadaro
Ndinoonga kuti gore rega rega unovandudza dhizaini yewebhu 😀
Dambudziko nderekuti haina kushata, asi haisi yekupfura maroketi futi, izvozvi mawebhusaiti ane dhizaini yakabatana, asi zvinoita kunge foramu webhu ... vanoshaya musoro wakakura uye font unoshamisa, zvinoita kunge kusanzwisisika. asi hei, hazvina kuipa futi.
Kana iwe uchida, ini ndinokupa iwe iyo Wirefrime iyo iwe yaungade zvakanyanya kupfuura izvo zvaunazvo.
Pindura kuna Alejandro Fogera